ios Archives - SmartMe
Archives tag: ios
Dom » Entries tagged with "ios"
Ity no faran'ny Cortana ho an'ny fitaovana Android sy iOS
Cortana, iray amin'ireo tetikasan'i Microsoft, dia nanana olana lehibe tamin'ny fandresena ny tsena. Tsy mahagaga raha tapitra ity fitaovana Android sy iOS ity. Tsy hiseho amin'ny iOS sy Android Cortana intsony i Cortana, izany hoe ...
Fantatsika ny datin'ny WWDC 2021. Inona no omanin'ny Apple amin'ity indray mitoraka ity?
paoma, iOS, iPadOS, macOS, watchOS, wwdc 2021
Ny orinasa avy ao Cupertino dia nanamafy ny datin'ny hetsika WWDC 2021, izay andrasan'ireo mpandrindra fatratra. Ny alatsinainy 7 jona izao no hanatanterahana izany ary handray ny endrika an-tserasera arakaraka ny areti-mandringana coronavirus mitohy. Inona ...
Apple dia manamafy ny anaran'ny iOS 15 sy macOS 12
paoma, iMac, iOS
Araka ny fantatrao tsara, Apple dia mikasa ny hampiseho rafitra vaovao roa ao amin'ny WWDC 2021 - iOS 15 sy macOS 12. Samy voamarika tao amin'ny WebKit ireo anarana roa ireo, ary ny volana Jona no andrasana ny fampandrenesana ireo rafitra roa ireo. Mazava ho azy...
Apple Maps ao amin'ny iOS 14.5 dia hisoroka toerana be olona
16 Martsa 2021
paoma, iOS, iOS 14.5, sarintany, sarintany paoma
Ny ekipan'i Tim Cook dia miasa tsy tapaka amin'ny fampidirana fanatsarana ny fampiasana telefaona mandritra ny areti-mifindra coronavirus. Ohatra iray amin'ny ezaka toy izany ny fiasa izay hiseho tsy ho ela ao amin'ny fampiharana Apple Maps. Fotoana hivoarana ...
Zuckerberg mitsikera ny iOS sy Android. Inona ny heviny?
Ny mpanorina sy filohan'ny Facebook - Mark Zuckerberg tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny tranokala The Information dia nanangana ny lohahevitr'ireo sehatra finday toa ny Android sy ny iOS ary niresaka kritika momba azy ireo. Diso fanantenana i Zuckerberg tamin'ny fanaovana politika App ...
Google dia mbola manemotra ny fampidirana marika manokana momba ny fiainana manokana amin'ny iOS
paoma, Google, iOS
Google dia nampihemotra ny fampidirana ny mari-pahaizana momba ny fiainana manokana amin'ny iOS nanomboka ny volana desambra. Ny labels dia ampiasain'ny mpampiasa hisafidianana ny fampiharana ampiasainy isan'andro. Na izany aza, Google dia tsy nanolotra fampahalalana toy izany tamin'ny ...
Apple dia manavao ny iOS, iPadOS, macOS Catalina, watchOS, tvOS ary HomePod
16 Jolay 2020
paoma, iOS, macOS
Betsaka ny fanavaozana namely ny tontolon'ny Apple omaly. Saika mandeha amin'ny fitaovana avokoa ny fitaovana rehetra. Ny fanovana lehibe dia ny fametrahana ny CarKey! Tsy ny zava-drehetra anefa. Ny CarKey efa rentsika hatrizay. Misaotra azy fa tsy ny fijan'ny fiara ...